व्रतको अर्थ–राजनीति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १४, २०७६ सिर्जना ढकाल
साउनको मैझारोसँगै तीजको चटारो सुरु भइसकेको छ । तपाईं धर्मकर्म र व्रतविधिको माहोलमा फिट हुनुहुन्न भने आफन्त र साथीभाइ माझमै ‘आउट साइडर’ ठहरिनु हुनेछ । गत साउनको एक दिन एउटा जमघटमा साउने व्रत कडिकडाउ पालना गर्ने एउटी आफन्त भेटिइन् । साउनभरि माछा–मासुदेखि लसुन–प्याजसम्म नखाने ।
त्यो दिन उनको कारण घरबेटीलाई अतिरिक्त हैरानी र तनाव भयो । उनको लागि विशेष ‘चोखो’ खाना त छँदै थियो, त्यसमाथि लसुन–प्याज राखेको तरकारीको भाँडाले छोइन्छ कि भन्ने जगजगी पनि । उनी केही वर्ष अघिसम्म यति कट्टर थिइनन्, अचेल कट्टरताको सिमाना देखिँदैन । यति मात्रै होइन, मंगलबार गणेश व्रत, एकादशी अनि पूर्णिमाको व्रत अनि शनिबारको व्रतको साथै बेला–बेलामा सम्भव भएसम्मका मन्दिरहरूमा पूजाआजा । अनि बेला–बेला विभिन्न ज्योतिषीकहाँ श्रीमान र छोराछोरीको चिनाचपेटा पनि लिएर पुग्छिन्, उनी । ३० वर्ष पनि ननाघेकी उनको यो भक्ति र अन्धविश्वास उदेकलाग्दो छ ।
अर्की परिचित महिला छन्, लोग्नेले हेंला गरेर सौता ल्याएको, उनी छोरी र सानी नातिनीसहित साउनको हरेक सोमबारमा शिवमन्दिर पुगेकै हुन्छिन् । तीजमा निराहार व्रत बस्छिन् । पञ्चमी पूजा पूरै विधिका साथ गर्छिन् । महिला भएकै कारण हिंसामा परेकी उनको शिवलिङ्गप्रतिको मोह झनै उदेकलाग्दो छ । आमा र हजुरआमाले विधि पुर्‍याएर गर्ने पूजाआजा र व्रत देखेर हुर्कंदै गरेकी नातिनीले ठूली भएर हजुरआमा र आमाकै बाटो नपछ्याउने कुरामा शंका लाग्छ । उसका साना हातमा लगाइएका हरिया चुरा अनि मेहन्दीले नै धेरै कुरा बोल्छ । यति मात्रै होइन, तीज लगायतका व्रत बस्नु किन आवश्यक छ भन्ने कुरामा सानोतिनो प्रवचन नै दिन्छिन्, उनी । पुरुष सत्ताबाट बिभिन्न बहानामा उत्पीडनमा पारिएकाहरू नै जानीबुझी वा नबुझेर त्यही सत्तालाई बलियो बनाउने उपक्रममा लागेको देखिन्छ ।
स्कुल, कलेज जाँदै गरेका किशोरी, युवतीहरू, कार्यालय भ्याउने कामकाजी महिला अनि घर धान्ने गृहणीहरू, महिला बुद्धिजीवी र राजनीतिकर्मीसमेत सबै साउनको सोमबारदेखि, तीज, पञ्चमी अनि शिवरात्रि व्रतको पछाडि यसरी परेका छन्, मानौं उनीहरूको सबै दुःखकष्टको निवारण तिनै व्रतहरूले गर्छन् । हाम्रा हजुरआमाहरूका हजुरआमा व्रत बसे, हाम्रा हजुरआमाहरूका आमाहरू व्रत बसे, हाम्रा हजुरआमाहरू व्रत बसे । यसैगरी हाम्रा आमाहरू व्रत बसे । तर पनि उनीहरूमाथिका उत्पीडन र दुःखकष्ट घटेनन्, बरु बढेर गए । व्रतका शक्तिले जीवनका दुःखकष्ट र उत्पीडनबाट मुक्ति मिल्ने भए पुस्तौं–पुस्तादेखि आमा हजुरआमाहरूले बस्दै आएका व्रतले आजसम्म महिलाको जीवन अर्कै भइसक्ने थियो । यो सबै देख्दादेख्दै पनि हाम्रो चेत खुलेको छैन ।
हामी एकातिर अध्यात्मवादको दास बन्छौं भने अर्कोतिर उपभोक्तावादले पनि हामीलाई चपाउँदैछ । एकातिर पढालेखा सहरिया र मध्यम वर्गका महिलाहरू शिव मन्दिरअघि भिड लागेका छन् । अर्कोतिर महिला केन्द्रित भनिने म्यागजिनदेखि मूलधारका सञ्चार माध्यमसम्म व्रत बस्दा के गर्न हुने के गर्न नहुने, के खान हुने के नहुने, गहना कस्तो के लगाउने, लुगा कस्तो लगाउने र कस्तो शृंगार गर्ने भन्ने बारेमा प्रशस्त टिप्सहरू भेटिन्छन् ।
हाम्रो समाजको मनुवादी मगजसँग बजारले लगनगाँठो कसिसकेको छ । मनुवादी मगज महिलाको जुनीलाई सर्वथा त्याज्य, हीन र तुच्छ सम्झन्छ र पुरुषसत्ताले यही मनुवादी चिन्तनका आधारमा आफूलाई बलियो र महिलालाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गर्छ । पितृसत्ता निःसृत यही हीनभावना र लघुताभासलाई हतियार बनाउँदै बजार महिलालाई कहिले हरिया चुरा र हरिया वस्त्र त कहिले छड्के तिलहरी र चन्द्रमा अनि राता सारीहरू बेचिरहेछ । लघुताभास बोकेर युवतीहरू अर्को जन्ममा महिला भएर नजन्मिनका लागि वा यही जन्ममा बलियो पुरुष प्राप्तिका लागि व्रत बस्छन् ।
बिहे गर्ने व्यक्ति छनोट र प्रेम गर्ने स्वतन्त्रता नदिने समाजमा साउन र तीजमा व्रत बसे, शिवको आराधना गरे, मनले चाहेको जीवनसाथी मिल्छ भन्ने विश्वास थोपरिन्छ । तर कसैले जातभातको विचार नगरी प्रेम गर्ने वा विवाह गर्ने कोसिस गर्‍यो भने उसलाई जबर्जस्ती छुट्याउनेदेखि हत्या गर्ने वा आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने गरिन्छ । यस्तो किन हुन्छ भनेर अहिलेको पुस्ता सोच्नतिर लाग्ने कि व्रत बसेर ‘चाहेको मान्छे पाऊँ’ भनी मन्दिरै धाउने ?
उपभोक्तावादका लागि संसार हरेक वस्तु उपभोगयोग्य छन् । उपभोक्तावादको लागि एकातिर महिला उपभोगको वस्तु हो भने अर्कोतिर उपभोक्ता पनि । धर्मलाई उपभोक्तावादले अपनाएपछि यी दुईको गठजोडबाट महिलामाथिको शोषण झन् चर्को हुँदो छ । धर्मले भन्छ— महिलाको सबै दुःखको समाधान पूजाआजा व्रतले हुन्छ । साउनमा व्रत बस, तीजमा व्रत बस, पञ्चमीको पूजा गर भन्छ । बजार अनि उपभोक्तावादले साउन अनि तीजको लागि लक्षित गरेर लुगा र गहना, शृंगारका सामान उपभोग गर्न लोभ्याउने र उक्साउने गर्छ । बजारको लागि हरेक चिज बिक्रीयोग्य वस्तु हो । जहिलेबाट उपभोक्तावादले धर्मलाई अँगाल्यो, उसले धर्मका हरेक भ्रमलाई वस्तुको रूपमा बजारमा प्रवेश गराएको छ । उसले धर्मलाई नै वस्तुको रूपमा बजारमा ल्यायो । लोकप्रियताको मापनमा विशेषतः महिलाहरू र बच्चाहरूमाझ सबैभन्दा लोकप्रिय धार्मिक कथाहरू भएका र अलौकिक शक्ति भएका पात्रहरूका कथा भएका सिरियल वा कार्टुनहरू नै छन् ।
साउन महिनाबाटै बजारमा बुटिकहरू, गहनाहरू अनि शृंगारका सामानको व्यापार ह्वात्तै बढिरहेको छ । विशेष रङका लुगा अनि पहिरनको बजारमा भएको खपत अनि यसको व्यापार डरलाग्दो छ । अरुभन्दा सुन्दर र फरक देखिने लोभ र भ्रममा हामी थाहै नपाइकन उपभोक्ताको रूपमा परिणत भइरहेका छौं । उपभोक्तावादले विभिन्न भ्रम र प्रलोभनहरू बाँडेर महिलालाई वस्तुमा परिणत गरेर बजारमा बेचिरहेको छ । अनि महिलालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाइरहेको छ । यसले महिलाहरूमाथि शासन गर्दै र थिचोमिचो गर्दै आएको पुरुषसत्ताको शक्तिलाई यो या त्यो बहानामा झन् बलियो बनाइरहेको छ । अचेल तीजमा महिनादिनसम्म क्याटरिङ वा रेस्टुरेन्टहरूमा दर खाने–खुवाउने चलन पनि उपभोक्तावादकै नमुना हो ।
बजारमा उपभोक्तावादका अनेक स्वरूप देख्न पाइन्छ, जस्तो– तीज स्पेसल भनेर विभिन्न सौन्दर्य प्रतियोगिता तथा मल तथा सपिङ सेन्टरहरूमा विशेष सेलहरू । अनि त्यसमा लाम लागेर भाग लिनेहरू प्रायः शिक्षा अनि चेतनाको राम्रै अवसर र पहुँच भएकाहरू नै बढी हुन्छन् । अनि सरकार जसले यस्ता कुरामा बोल्ने नैतिक हैसियत गुमाएको छ, उसले हठात् निर्णय गर्छ, तीजमा पार्टी प्यालेसहरूमा तीजका कार्यक्रम गर्न नपाउने भनेर । सरकारले बेला–बेलामा बिर्सन्छ कि यतिबेला बजारको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता नै सरकार हो र उसको वर्ग अनि धरातलले बजारको अनि उपभोक्तावादको विरोध गर्न सुहाउँदैन पनि ।
विगतमा कतिपय महिलाले तीजलाई राजनीतिक चेतना जगाउन उपयोग पनि गरे । तर व्रतरूपी अन्धविश्वास हटाउन सकेनन् । सतहमा हुने राजनीतिक परिवर्तनसँगै महिला कार्यकर्ताहरू अहिले भोटको राजनीतिको भुलभुलैयामा रुमल्लिएको देखिन्छ । त्यसैले महिला सरोकारका तमाम मुद्दाहरू र महिला मुक्तिको विषय अध्यात्मवादी व्रत राजनीतिलाई सुम्पेर चुपचाप बसेका छन् । उनीहरू आफैं पनि व्रतवादी अर्थराजनीतिको चक्रव्यूहबाट मुक्त हुनसकेको देखिंँदैन । राजनीतिक नेतृत्व अल्मलिए पनि या उसले धोका दिए पनि यदि महिलाहरूले आफ्नो जीवनलाई सहज, सरल र सम्मानयुक्त बनाउने हो भने धर्म र उपभोक्तावादले फैलाउने तमाम भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । अध्यात्मवाद र उपभोक्तावादलाई टाउकोमा बोकेर गरिने यात्राले भ्रम नै सिर्जना गर्ने हो, मुक्ति दिँदैन ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:१८
भाद्र १४, २०७६ गोविन्द पौडेल
स य वर्षअघि प्रख्यात अमेरिकी शिक्षाविद जोन डिबेले तत्कालीन विज्ञान शिक्षामाथि टिप्पणी गर्दै भने, ‘विज्ञान शिक्षा सोच्ने, अनुसन्धान गर्ने र विचारलाई रूपान्तरण गर्नेभन्दा बनिबनाउ विषय मस्तिष्कमा कोच्ने कुरामा उद्यत छ ।’ पछिल्लो सय वर्षमा पश्चिमा देशले शिक्षामा आमूल सुधार गरी विज्ञान–प्रविधिको अभूतपूर्व विकास गरे । हामी डिवेकै टिप्पणीमा रोकिएका छौँ ।
स्कुल/कलेजको कक्षामा ४०/५० जना विद्यार्थी कोचेर शिक्षकले अणु/परमाणु, धातु/अधातु, रासायनिक क्रिया/प्रतिक्रियाबारे बेजोड व्याख्या गर्छन् । न्युटन, आर्किमिडिज, डाल्टन, मेन्डेलिभ र मेन्डलका सिद्धान्तबारे विशद चर्चा गर्छन् । ‘ग्यालेक्सी’ र ‘ब्ल्याक होल’को वरिपरि विद्यार्थीलाई उडाउँछन् । विद्यार्थीलाई एकादेशको कथाजस्तो लाग्छ । यी सिद्धान्तबारे प्रत्यक्ष हेर्न र अनुभूत गर्न पाइन्न । सुन्यो, सबै वैज्ञानिक विदेशका । शिक्षण संस्थासँग परमाणु हेर्न मिल्ने ‘इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप’ छैन । ग्यालेक्सी, ग्रह, पुच्छ्रेतारा प्रस्ट हेर्न मिल्ने टेलिस्कोप पनि छैन । ‘यो भनेको यस्तो हो, यस्तो भएपछि यस्तो हुन्छ’ भन्ने कोरा कल्पनामा विज्ञान कक्षा अलमलिएको छ ।
सन् १९५० मा विज्ञान र प्रविधिको गुणात्मक र परिमाणात्मक विकासका लागि अमेरिकामा ‘नेसनल साइन्स फाउन्डेसन’ को स्थापना भयो । यसले गणित, इन्जिनियरिङ, औषधि, जीव र भौतिक विज्ञान लगायतका क्षेत्रमा आधारभूत वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई अघि बढायो ।
मानव इतिहासमा पहिलोपटक सन् १९५७ मा सोभियत संघले ‘स्पुतनिक–१’ भू–उपग्रह प्रक्षेपण गरेपछि संसारभर हल्लीखल्ली मच्चियो । दोस्रो विश्वयद्धले सबैभन्दा शक्तिशाली बनाएको अमेरिकालाई यो घटनाले नराम्रोसँग झस्काइदियो । एक वर्षमै १९५८ मा अमेरिकी स्कुलमा विज्ञान र प्रविधिको शिक्षालाई समयानुकूल विकास गर्नेगरी अमेरिकी कङ्ग्रेसले ‘नेसनल डिफेन्स एक्ट’ पास गर्‍यो । स्कुलको विज्ञान र प्रविधिको शिक्षामा ठूलो लगानीको घोषणाले देशमा विज्ञान प्रविधिको विकासमा बलियो जग निर्माण गर्‍यो ।
विज्ञानको अवैज्ञानिक पढाइ
हाम्रा विज्ञानका पाठ्य–पुस्तक लामा परिभाषा र सिद्धान्तको सङ्ग्रह बनेका छन् । त्यसैले अधिकांश विद्यार्थीर्ले यसलाई बोझको रूपमा लिन्छन् । उन्नति गरेका देशका पाठ्य–पुस्तक हेर्दा परिभाषा खास देखिन्नन् । हाम्रो परीक्षामा परिभाषा र सिद्धान्त घोकेको छ या छैन, जाँच्ने खालका प्रश्न सोधिन्छ । स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान पढ्नुको अर्थ शब्द घोक्नु भन्ने छ । विज्ञान जस्तो विषयमा घोकाइले केही अर्थ राख्दैन । विज्ञानको अर्थ अनुसन्धान हो, सोच हो, चिन्तन हो, आविष्कार हो । हाम्रो विज्ञान पढाइ आविष्कार, चिन्तन र अनुसन्धान विरुद्ध खडा छ ।
सेतो बोर्डमा कालो मार्करको भरमा देशभर विज्ञानको पढाइ चलिरहेको छ । कोर्स सक्ने हतारोमा शिक्षण सीमित भएपछि विद्यार्थीको कल्पनाशीलता, उत्सुकता, जिज्ञासा र सक्रियता दमित भएका छन् । रटानको बानी र स्कुलले खोज्ने ग्रेडले विद्यार्थीको सिर्जनात्मक दिमाग निचोरिएको छ । प्रश्नको गर्भबाट आविष्कार जन्मिने हो । बनिबनाउ उत्तर रटानको व्यस्तताले, प्रश्नमा घोत्लिने विद्यार्थीको समय ध्वस्त पारेको छ ।
नाम मात्रका प्रयोगशाला
स्कुलको विज्ञान पढाइ प्रयोगबाट टाढा छ । म धेरै स्कुल/कलेज घुमेको छु । म आफै विज्ञानको विद्यार्थी र शिक्षक हुँ । अधिकांश स्कुलमा भन्नलायक प्रयोगशाला भेटिन्न । विज्ञान पढाउने कलेजहरूमा पनि सामान्य खालको प्रयोगशाला छ । ‘प्राक्टिकल’ झारातिराइ खालको छ । विद्यार्थी नयाँ खोज, आविष्कारका लागि डुबेर ‘प्राक्टिकल’ गर्दै छैनन्, ‘प्राक्टिकल’ परीक्षामा त्यही गरेर देखाउन सक्ने हुनका लागि ‘प्राक्टिकल’ गर्दैछन् । यसकारण विश्वविद्यालय अन्तर्गतका प्रयोगात्मक कक्षासमेत गन्तव्यविहीन छन् ।
१९७५ सालमा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएपछि विज्ञान शिक्षा पठन–पाठन आरम्भ भएको हो । सय वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले विज्ञान प्रविधिको प्रयोगलाई हाम्रो विकाससँग तालमेल गराउनसकेका छैनौँ । विज्ञानको अध्ययन/अध्यापनलाई अनुसन्धानसँग नजोड्ने हो भने अर्को सय वर्ष पनि हामीले गुमाउनेछौँ । प्रविधिका स–साना सामान पनि हामी उत्पादन गर्न असमर्थ छौँ । विदेशबाट ल्याइएका गाडीका पाटपुर्जा यहाँ ल्याएर जोडेपछि ‘मेड इन नेपाल’ भनेर लेख्नुपरेको छ ।
विज्ञानका पाठ्य–पुस्तकमा कोही नेपाली वैज्ञानिकको नाम छैन । नेपाल भित्रको विज्ञान पनि छैन । हुन त वैज्ञानिक कुनै देश विशेषको हुन्न, तर प्रश्न नेपालमा किन प्रभावशाली वैज्ञानिक जन्मिएनन् भन्ने हो । संसारै हल्लाउनेगरी नभए पनि केही नेपालीले विज्ञानको क्षेत्रमा योगदान नदिएका होइनन् । स्व. अमृतप्रसाद प्रधान, स्व. दयानन्द बज्राचार्य, उदयराज खनाल, लुजेन्द्र ओझा, सुदर्शन कार्की, सुरेन्द्र अधिकारी जस्ता वैज्ञानिकहरू मुलुकले नजन्माएको होइन । तर नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीलाई यिनका खोज, अनुसन्धानबारे पढाइँदैन । विज्ञान किताब नेपाली माटो र हावापानीबाट अलग छ । विद्यार्थीलाई पढ्दा दिक्क लाग्नु स्वाभाविक हो । पेरियोडिक टेबल, रासायनिक प्रतिक्रिया, प्रोपेन, ब्युटेन, इथर, डार्बिनिजम, मेन्डेलिजम अनेक अनौठा तथ्यले पाठ्य–पुस्तक भरिएका छन् । यिनीहरूको नेपाली प्रयोग खोइ ? कक्षामा सुन्यो, घरमा घोक्यो, परीक्षामा लेख्यो, त्यसछि बिर्सियो ।
स्वदेशको भू–गर्भ, हावापानी, जडिबुटी, ऊर्जा, वन, कृषि, प्रविधि र उद्योगसँग जोडिनेगरी विज्ञान शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक र प्रयोगात्मक बनाइनुपर्ने थियो ।
डा. लिम सिआओले सन् १९९३ मा ‘डिएक्सएन’ कम्पनीको स्थापना गर्नुपूर्व गानोडर्मा अर्थात् रातो च्याउमाथि गहिरो अनुसन्धान गरे । उक्त च्याउमा अनेकौँ औषधीय गुण फेला परेपछि आफ्नो कम्पनीको उत्पादनमा यही च्याउलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।
हाम्रा वरिपरिका जडिबुटीमाथि कमैमात्र अध्ययन भएको छ । जति अध्ययन भएको छ, विदेशीले गरिदिएका छन् । तितेपाती, घोडताप्रे, यार्सागुम्बा, तुलसी, सिस्नो, कुरिलो लगायत सयौँ प्रकारका वनस्पतिमा महत्त्वपूर्ण औषधीय गुण छ भन्ने थाहा पाइएको छ । तर पर्याप्त अनुसन्धानका लागि जीव र चिकित्सा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई लगाउन सकिएको छैन ।
यस्ता बहुमूल्य वनस्पतिको महत्त्वबारे विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई जानकारी दिने र थप उत्सुक गराउने काममा विज्ञान कक्षा चुकेको छ ।
नेपाली जमिनभित्रका धातु, मणि, रत्न तथा पेट्रोलियम खोज, अध्ययन र उत्खननका लागि चिनियाँ/जापानिज विज्ञ नै बोलाउनुपर्ने अवस्था छ भने आजसम्मको विज्ञान पढाइको औचित्य के ? अहिलेको पढाइले देशलाई यो हदसम्म परजीवी बनाएको छ ।
जिज्ञासुहरूको विदेश पलायन
विश्वविद्यालयबाट विज्ञानमा ‘मास्टर्स’ सकेर निस्कँदै गर्दा युवासँग दुई विकल्प बाँकी रहन्छन् । विज्ञानको मास्टर भएर बस्ने वा विदेश जाने । विज्ञान पढेका उर्वर मस्तिष्कलाई योजनाबद्ध रूपमा स्वदेशमै अनुसन्धानमा लगाउने कुनै योजना छैन । विश्वविद्यालय, मन्त्रालय र नाष्ट निदाएका छन् ।
विज्ञान पढेका व्यक्तिको राम्रो मूल्य छ, विदेशमा । अमेरिकाले अरु विषयभन्दा विज्ञान पढेकालाई धेरै भिसा यत्तिकै दिएको होइन । अरु देश तीक्ष्ण मस्तिष्कलाई खोजी–खोजी भित्र्याउँछन् । हामी भने बाहिर लखेट्छौँ । फरक यत्ति हो ।
हामी सानो छँदा अग्रजहरूबाट सुन्ने गर्थ्यौं, ‘हाम्रा वेद, महाभारत, रामायण जस्ता ग्रन्थ पश्चिमा देशले लगेर अनुसन्धान गरे र विज्ञान प्रविधिको विकास गरे ।’ राइट दाजुभाइले जहाजको आविष्कार गर्नुअघि रामायणको पुष्पक विमानको अध्ययन गरे वा गरेनन्, थाहा भएन । ओटो हानले परमाणु बमको निर्माण गर्नुअघि अग्नि, वरुण, गाण्डिव र ब्रह्मास्त्रको नालीवेली समेटिएको महाभारतको अध्ययन गरे वा गरेनन्, त्यो पनि थाहा छैन । गम्भीर रोगका औषधिका आविष्कार गर्दा वैज्ञानिकले हाम्रो अथर्व वेदको अध्ययन गरे वा गरेनन्, उनीहरू नै जानुन् । तर यी धार्मिक ग्रन्थभित्रको विज्ञानमाथिको अनुसन्धान गर्न विश्वविद्यालयको पढाइले हामीलाई प्रेरित नगर्नु आश्चर्यलाग्दो छ ।
हाम्रा विविध संस्कृति, ग्रन्थ र प्रचलनमाथि समेत गहिरो वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ । देशको कृषि, ऊर्जा, उद्योग, वातावरण, प्रविधि तथा भौगर्भिक अनुसन्धानमा हाम्रो देश प्रवेश नै गरेको छैन । यसका लागि विज्ञानका विद्यार्थीलाई आर्थिक र भौतिक वातावरण उपलब्ध गराइदिनुपर्थ्यो । पाठ्य–पुस्तकलाई देशसँग जोड्नुपर्थ्यो । अनुसन्धानका लागि प्रेरित नगर्ने शिक्षा तर्जुमा गरेर देशलाई विकसित बनाउँछौँ भन्नु बालुवाको महल ठड्याउने गफमात्र हो ।
प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०८:१५